Sulzer akunika kwamanzi ngwenya XJ series
Sulzer longeze i XJ900 ukuya XJ uthotho yayo kwamanzi ngwenya iimpompo eyenzelwe kwemigodi, Tunneling okanye ukwakhiwa.
Sulzer laqalisa kuthotho XJ of kwamanzi ngwenya iimpompo ngo-2012 kwaye XJ900 kukho intsebenzo uluhlu ukwandiswa thotho. Le nkampani ithi yinto ukhetho enoqoqosho noluthembekileyo ukuze wokutsala amanzi izicelo.
Le Impompo entsha lixhotyiswe eliphezulu-kakuhle injini yombane rated 90 kW yeemarike Hz 50 108 kW (145 hp) yeemarike Hz 60. I eliphezulu-kakuhle IE3 motor kunye hydraulics ezintsha ezidityanisiweyo kunye iibheringi ezisezantsi-zochuku ukunciphisa ilahleko ngamandla. Ngenxa yoko, iindleko zizonke amandla asezantsi, kwaye umzila carbon lifinyele.
Uyilo ngamanzi ivumela ukuguqulwa elula phakathi ophezulu intloko eliphezulu-flow sisimo kunye kuthetha ukuba abenzi nga Stock iimpompo ezimbalwa kwaye usenalo ukusebenza ekunene hydraulic sesicelo ethile le.
Post ixesha: Feb-19-2020